Tontolon’ny lamaody : nodimandry i Ben Madagascar | NewsMada
Tontolon’ny lamaody : nodimandry i Ben Madagascar
Tsy mamela mahazo Rafahafatesana… Misaona indray ny tontolon’ny famoronan-damaody sy ny zavakanto amin’ny ankapobeny. Fantatra mantsy fa nodimandry ny alakamisy alina teo i Ben Madagascar, mpamoron-damaody fanta-daza ary efa manana ny toerany eo amin’izay sehatra izay. Rajaonarisoa Solofo Andriamparany no tena anarany, ary 43 taona izy izao nodimandry izao.
Mpamoron-damaody ho an’ireo mpihira malaza malagasy maro i Ben. Anisan’ireny ry Poopy, Mia, Inah, sns. Izy, ohatra, no namorona ny akanjo mariazin’i Tahiry (Ndondolah) sy ny vady aman-janany, farany teo.
Tao amin’ny fandaharana amin’ny fahitalavitra “Tendances no tena nahafantarana an’i Ben. Nialoha izany, naka traikefa tamin’ireo mpamoron-damaody efa matihanina, toa an-dry Vida izy, ary niara-niasa akaiky tamin-dry Juliana Anjavola sy Aina. Nanome lanja ny “gasigasy” hatrany i Ben, hatramin’ny nanombohany. Hita taratra tamin’ireo sanganasany naseho voalohany tao amin’ny K’Art Antanimena ny taona 2006 izany, izay nanomezana lanja ireo akora vita malagasy.
“Efa niaraka nandroso teny isika, dia tiako raha mba miaraka mankalaza ny faha 15 taona nanaovako famoronan-damaody…” Io ny resaka farany nifanaovany tamin’i Hary Yvette, tompon’andraikitra voalohan’ny fandaharana “Tendance” sy ny hetsika “Tendance Show”, izay tena nahafantaran’ny maro an’i Ben. “Nanaiky avy hatrany aho, ary tapaka tamin’izay fa hatomboka amin’ny faran’ity taona 2017 ity izany”, hoy hatrany i Hary Yvette.
Tsy izay anefa ny lahatra… Toa an’i Hary Yvette, aman-jatony ireo namana, mpiara-miasa ary fianakaviana vonton’alahelo naheno ny fahalasanan’i Ben. Araka ny fandaharam-potoana voalahatra, andrasana etsy amin’ny Tranompokonolona Analakely, nanomboka omaly hariva, ny nofo mangatsiakany. HIala ao ny alahady 16 jolay amin’ny 11 ora antoandro ny razana, ka entina hanomezam-boninahitra an’Andriamanitra eny amin’ny Fjkm Ambatolampy Antehiroka Fitiavana, mialoha ny hametrahana azy ao amin’ny fasan-drazany ao Ambohibao Antehiroka.